तोकिएन प्रदेश प्रमुख र राजधानीः किन पछि हट्यो सरकार ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
तोकिएन प्रदेश प्रमुख र राजधानीः किन पछि हट्यो सरकार ?
प्रकाशित मिति: २८ पुष २०७४, शुक्रबार
काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकि मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको छ । सरकारले अाजै प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्ने भनि चर्चा भएपनि यस विषमा कुनै निर्णय नगरि मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको हो ।प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने लगायतका प्रदेशको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी अति जरूरी कार्यहरु तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी रूपमा स्थान तोक्न आवश्यक तयारी गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र उनीहरु बस्ने अस्थायीमुकाम तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालसंग छलफल गरेका थिए । परामर्शपछि नै शुक्रबार नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारीबाट प्रधानमन्त्री देउवा पछि हटेका हुन् । छलफलमा सरकारले प्रदेश प्रमुखसँगै अस्थायी कार्यालय पनि तोक्नुपर्ने र अस्थायी कार्यालय तोक्दा जनतामा त्यो नै अस्थायी राजधानी हो भन्ने सन्देश जाने सुझाव आएपछि प्रधानमन्त्री तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको स्रोतको दावी छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकार काम चलाउ भैसकेको दावी गर्दै एमाले र माओवादीले सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने बताएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्ने निर्णय गर्न सकेको छैन् । यसअघि आज बस्ने बैठकले प्रदेश प्रमुख र उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्न मुकाम तोक्ने बताइएको थियो। सरकारले सोमबार मात्रै यस विषयमा निर्णय गर्ने स्रोतले जानकारी दियो ।
आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले धनकुटाको खोकुछिन्ताङ काण्डमा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । २०३६ साल कात्तिक २७ गते भएको घटनामा राज्य पक्षबाट १६ जना मारिएका थिए । त्यस्तै, बैठकले न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा महेन्द्रनाथ उपाध्याय र पुनरावेदन समिति प्रमुखमा हेमराज पन्तलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्मला हत्यामा स्थानीय प्रहरीले बदमासी गर्दा सरकार नै आलोचित: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
सुर्खेत । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कञ्चनपुरका बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा […]
देउवा निकट नेता पदाधिकारी बढाउने पक्षमा, आफ्नैबाट पौडेललाई काउन्टर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरु नै पदाधिकारी बढाउनु […]
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा ढिलाई, अब २ दिनभित्रै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधिशको सिफारीस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ढिलाई भएको छ । सर्वोच्च अदालतका […]
नेकपाको प्रदेश कमिटीको नामावली सार्वजनिक, कुन प्रदेशमा कति ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाएको छ । गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले सातै […]